Ọjọọ ndepụta - Onye gburu olu Chineke - Part 5 | Apg29
Site Hans Jansson , Uppsala
E nwere ihe na "nkọ" na ihe ọjọọ nke Herod omume na onodu na anyị na-akọwa. Ahụ na-eweta m ka ihe e dere n'akwụkwọ Jenesis.
"Ma agwọ di ọzọ aghụghọ karịa ihe ọ bụla anụ ọhịa nke ubi nke Jehova Chineke mere ka '1. Ọ bụ na "listiges" udi ka ekwensu pụtara maka oge mbụ na ndi mmadu nke arena.
The New Testament egosi ya dị ka a aghụghọ eri ibe. E nwere okwu nke ya dị ka a na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ nwere ike na-erepịakwa ya.
Anyị maara na ọdụm na-eji ọtụtụ aghụghọ enwetaghị ha na-eri anụ. Ọ na-eme ka ekwensu kwa. Herod Antipas bụ N'ezie anya n'elu aghụghọ nwe-eri agwa, ọ na-gụrụ mgbe o guzogidere olu nke Chineke ná ndụ ya. N'ihi na ihe niile oge a na-echere ihe ọjọ onyenwe nke oge kwesịrị ekwesị ka ọnyà ya metụtakwara na-eri anụ. Na ọ na-ekwu na oge nke Herodias rụrụ ọjọọ ya àgwà igbu Jọn Baptist: "Mgbe ahụ, wee a ụbọchị oge kwesịrị ekwesị". Ya mere, n'ihi na ekwensu na ihe oge kwesịrị ekwesị, ka ọnyà ha tara. Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị na-ebi nso Jizọs na okwukwe anyị ndụ, ka anyị ghara ịbụ ihe dị mfe na-eri anụ.
Na] dee akwụkwọ, anyị na-ahụ ihe atụ nke otú ọkàiwu (ekwensu) na-achọ ka ya na ọ ga-ebibi. On ajụjụ nke Chineke ebe ọ ga-aza ọkàiwu: "Site fee n'ụwa, na site na-eje ije gburugburu." 3
Ọ bụkwa doro anya na o nyere ntị ohu Chineke bụ Job, ya mere kwalitere na] obs mgbe nile ịga nke ọma ga-agbanwe ihe ọ bụla ma ihe ndọghachi azụ. Nke a bụ ihe atụ nke ihe ịma aka anyị na-enwe na-esiteghị na Chineke. The Bible na-ekwu na site na Chineke bụ ihe ọ bụla ma ezi onyinye. 4
Ọ bụ ezie na ndị ohu Chineke bụ isiokwu nnabata ya na ekwensu na ọgụ. Ohu Chineke] Ob bụ ihe atụ. Ọ dịghị onye bụ free si transmigration iro ememe. Ọ na-ahụ ma ọ bụrụ na anyị ji ezi obi na anyị nwere okwukwe na Jizọs. Ọ bụrụ na anyị, anyị na-na-na nsogbu. Ebe ọ na-ekwu na ekwensu arịdakwuruwo ụwa, "na-enwe oké iwe, n'ihi na ọ maara na oge ya dị mkpirikpi '5.
Akwụkwọ Nsọ n'elu-agwa ekwensu, dị ka a na-ebigbọ ebigbọ. Nyere ọdụm ndepụta, ọ bụ eftersläntraren ìgwè anụ na-agwụ elu na eri ibe si jaws. Eri ibe-echere ndị na-adịghị na-na nnukwu ìgwè ehi na-agba ọsọ ọdụm ịchụ nta mgbakwasị.
N'ihi ya, ọ bụ na ihe ọjọ ichu nta n'ihi na ndụ ime mmụọ anyị. Ghara ibu a ime mmụọ na-eri anụ, ọ dị mkpa ịdị ndụ na Mmụọ ike na n'otu.
Ọ mere juru m na ọtụtụ Ndị Kraịst na-akpọ ụmụnna na-ebi ndụ a n'ụzọ ime mmụọ na-adịghị ike ndụ. Ọ fọrọ nke nta ka ha na-eme nke ọma ebe ihe ize ndụ egwu ime mmụọ ha ndụ. Herod Antipas bụ na nsogbu na-abụghị ihe ijuanya. N'ihi na ọ bụla na-azoputaghi bụ kpam kpam na ebere nke ya ndụ ime mmụọ. Omume ọma na-agwa na-enyere N'eziokwu ukwuu, ma na-apụghị ịzọpụta onye mmehie. Ọ bụ nanị okwukwe na Jizọs na-eme?
Ụmụ mmadụ adịghị ka ụmụ anụmanụ na-anwụ anwụ na-ebighị ebi spirit. Ọ bụ nke a ime mmụọ mkpụrụ obi nke na a ga-azoputa ebighị ebi. Onye ọ bụla bụ na-echebe ndị Chineke dị ndụ dị ka a na-adịghị ike na-eri anụ maka ekwensu. Na na ọ bụ si na-ezu ohi, igbu, na döda.7 Anyị na-anụ kwa ụbọchị otú ndị mmụọ ọjọọ na-achịkwa ndị mmadụ mgbe anyị mgbe niile na-anụ banyere ndị na-esiwanye ike ime ihe ike. Ọ bụ a gbara ọkpụrụkpụ na-egosi na ekwensu eri ọdịdị nke oge anyị.
Mgbe e mere Jizọs nwaa n'ala ịkpa, ọ na-ekwu na Gospel na: "O biri n'ọzara ụbọchị iri anọ, Setan nwara ya. N'ebe ahụ, ọ biri n'etiti anụ ọhịa, na ndị mmụọ ozi gara ya '8.
Onwe ya, m na-ahụ ndị a na anụ ọhịa, dị ka ihe oyiyi nke mmụọ ajọ omume na ụwa na mmehie desert. A ebe anyị n'ụzọ ime mmụọ na-adịghị ike na ndụ ime mmụọ anyị. Ma, anyị, dị ka Jizọs, ga-ewere ya na-eje ozi ndị mmụọ ozi na Mmụọ Nsọ enyemaka. Anyị ga-Jesus-abịa na nke a wilderness chekwara na jupụta na Mmụọ Nsọ. Ọ na-ekwu na Jizọs na-jupụta na Mmụọ Nsọ mgbe ọ pua ba n'ọzara ebe nwara ya ọnwụnwa ekwensu. Ma, ka juputa na Mọ Nsọ, ọ hapụrụ ọnwụnwa öken9.
Na ikpe nke Herod Antipas, na ọ bụ nke a na ezinụlọ a na ikpere arụsị nke e agụ dị ka a omenala, na na ọ dịghị ụzọ nwere nchedo nke Chineke na-eme. Dị ka anyị hụrụ na aga na isi, ya na ezinụlọ ya Alaeze Ukwu Rom kwesịrị ntụkwasị obi kemgbe nna nna Antipater oge. Ha na-eme ememe Alaeze Ukwu Rom ike na-efe ofufe eze ukwu dị ka a chi.
Ha n'ụzọ dị ukwuu omume novices na-adịghị eme ebere megide onye ọ bụla egwu ha ike. Alaeze Ukwu Rom akụkọ ihe mere eme na-akọwa otú ha omume na ihe ime ire ere agbasa ya ire ure nke eze ukwu na ndị niile na-elekọta mmadụ na klas. Na ọ bụ nke a omume na ihe ime decadence nke mere ka a dị mpako alaeze nke ikpe na mkpebi.
N'ụzọ dị mwute, ọ ga-aga anyị onwe anyị obodo ahụ n'otu ụzọ ma ọ bụrụ na ị na-anọgide na a ụzọ, n'ụzọ ime mmụọ na n'omume. Ọ na-ewetu ya bụ ime mmụọ na-azara ọnụ na anyị nwere ike na-na Jesus Christ. Anyị bụ ndị, ndị ọzọ okwu ahụ kpatara ọdachi mkpa maka Kraịst mba revival. Ma ọ bụghị mmehie amadi adọ oge ọbụna ihe weghara a mba, dị ka eri ibe-awakpo na-adịghị ike.
Eziokwu nke okwu Chineke nwere ike ịbụ na-eweta nsogbu, dị ka ọ bụ n'ihi na Herọd Antipas. E nwere nkọ okwu na Jọn Baptist kwuru na nke mmehie ya. Ma ọ bụ nanị n'ụzọ dị otú a nwere ike ịbụ na okwu Chineke banye n'ime ime nke onyeisi. Okwu Chineke na-ewute mgbe ọ na-akụrisị sore akwara na a mmadụ na-akọ na uche. Ma, dị ka mkpa dị ka ọ bụ na-arịa ọrịa n'ime ahụ anyị na-efu, ma ọ bụrụ na anyị na-adị ndụ, ọ dịkwa mkpa na mmehie na-efu ka anyị na-ebighị bụla. Ndị na-amasị Herodias chọrọ enwetaghị na-egbu otu onye na-eburu Chineke kwuru banyere mmehie na amara, ga-otu ụbọchị ihu ikpe Chineke. Ya mere ka anyị buru n'uche okwu nke Chineke kwuru na-asị: "Atụla egwu nke ndị na-egbu ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Egwu kama ya onye nwere ike ibibi ma mkpụrụ obi ma ahụ n'ime hell "1 Celsius.
Ma ka m kwuru, mmadụ nwere free uche. Herod Antipas họọrọ na-enweta n'ụwa ịma mma na-eso bụ nwaanyị ahụ ga na-edu ya mbibi. N'ịbụ "eri ọdịdị" anyị hụrụ otú Herodias chere na nku dị ka eri ibe on eftersläntraren, n'ihi na mgbe oge ịrụ ọjọọ ha àgwà. The oge mgbe ọ bụ otú na-adịghị ike na ọ ga-adị mfe wetara ya n'ime "anụ ọhịa" jaws.
Notes: 1) 1 Gen.3: 1st 2) 1 Pet.5: asatọ 3)] ob.1: 7th 4)] ak.1: 17 (1917 afọ trans.) 5) Rev. 12 12. 6) Apg.4: 12 7)] oh.10: 10th 8) Mark.1: 13 9) Luk.4: 1st 14. 10) Matt.1O: 28th
Vecka 26, onsdag 26 juni 2019 kl. 04:31